Euro 2016: Xulka Faransiiska oo iska xaadiriyey wareegga 8-da Koobka Qaramada Yurub markii ay guul soo laabasho ah ka gaareen Ireland + Sawirro – Gool FM
(Paris) 26 Juunyo 2016 – Xulka qaranka Faransiiska ee marti galinaya sanadkan koobka qaramada Yurub ayaa iska xaadiriyey wareegga siddeed dhammaadka tartankan, markii ay guul soo laabasho ah ka gaareen dhiggooda Ireland.
Labo daqiiqo oo qora ayey ku qaadatay xulka Ireland inuu hoggaanka ciyaarta kala wareego Faransiiska, waxaana rigoore uu qaladkeeda lahaa Paul Pogba gool u bedelay Robert Brady.
Inkastoo fursado goolal loo filan karay ay labada dhinac isku heleen, xulka Faransiiskuna uu kubbad haysashada ku wanaagsanaa qeybta hore, haddana waxaa lagu kala nastay 1-0 looga gacan sarreeyey marti geliyaha tartankan ee Faransiiska.
Qeybtii labaad ee ciyaarta markii dib la isugu soo laabtay ayay xulka Faransiisku la yimaadeen wareer aan kala joogsi lahayn, waxaana u suura-gashay inay ciyaarta dhanka kale u rogaan.
Guushaan waxa ay Faransiisku uga mahad-celinayaan xiddiga kooxda Atletico Madrid ee Antoine Griezmann, kaasoo labo gool u saxiixay.
Antoine Griezmann ayaa goolka barbaraha u dhaliyey France, kaddib markii uu madax xoog leh ku shubay shabaqa Ireland, kaddib karoos wacan oo uu ka helay saaxiibkiisa Bacary Sagna, waxaana uu ciyaarta ka dhigay 1-1.
Saddex daqiiqo kaddib goolkaas Antoine Griezmann ayaa hoggaanka u soo celiyey xulkiisa Faransiiska, kaddib markii kubbad uu madax ugu wareejiyey Giroud uu goolhayaha dhinac ka dhigay 61′ daqiiqo, kulanka ayaana isku rogay 2-1 ay ku gacan sarreeyeen France.
Weerarka Faransiiska ayaa sii socday, iyadoo nasiib darro xulka Ireland uu kaarka cas oo toos ah ka qaatay 66′ daqiiqo Shane Duffy, markii uu jilaafay Griezmann oo doonayey inuu saddexleeydiisa kulankan dhamaystirto.
Tan iyo markii ay kaarka cas qaateen xulka Ireland, marti geliyeyaasha tartanka ee Faransiiska ayaa kubadda sida ay doonaan u maamulanayey ilaa dhammaadkii ciyaarta, iyadoo mar uu biraha garaacay Andre-Pierre Gignac oo kulanka bedel ku soo galay, kulanka ayaa ku soo dhammaaday 2-1 uu ku adkaaday xulka France.
Mucalaqii khafiifay kulankii ay Iceland waqtiga dambe goolka ka dhalisay Austria oo shaqadiisii waayey!